Nagu saabsan - Shandong Buluoer Technology Intelligent Co., Ltd.
Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. Shirkadda waxay ku xiran tahay shirkadda Shandong Jubangyuan Machines.S.Scicizes in CNC Plasma mashiinka goynta, qalabka goynta hilibka laser, qalabka alxarka, nidaamka CNC iyo qaybaha cilmi baarista iyo horumarinta, soosaarka, iibinta iyo service.The kooxdu waa shirkad teknolojiyad sare leh oo leh 24 sano oo waayo-aragnimo soo saar farsamo ah. Waxay leedahay koox R&D xirfadle ah waxayna heshay 25 rukhsad qaran oo sharciyeysan.
Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee IS09001. Marka loo eego shuruudaha nidaamka maareynta deegaanka ee IS014001, waxay si adag u xakameysaa dhammaan dhinacyada alaabta ceyriinka, farsameynta, mashiinka iyo shixnadaha si loo hubiyo waxqabadka iyo tayada alaabooyinka .Badeecooyinka badan ayaa la caddeeyay.
Shandong Buluoer Sirdoonka Tiknoolajiyadda Co., Ltd. waxay ku takhasustay qalabka goynta laser, qalabka goynta plasma, mashiinka goynta birta goynta, qalabka alxanka, nidaamka CNC iyo qaybaha shaqada R&D, nashqadeynta, soosaarka, iibinta iyo adeegga.Is waa hogaamiyaha dhaqaalaha Shiinaha Mashiinka goynta CNC. Waa shirkad "takhasus gaar ah iyo hal-abuurnimo" ka sameysay Jinan.
Waxyaabaha ay soo saarto shirkadda waxay leeyihiin xuquuq madax-bannaan oo madax-bannaan oo badan, rukhsado farsamo oo fara badan iyo xuquuqda lahaanshaha software-ka. Alaabtu waxay ka gudbeen shahaadada tayada ee ISO 9001 oo si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa gudaha iyo dibadaba. Waxaa lagu amaanayaa adeegsadayaasha gudaha iyo shisheeyahaba wax soo saarkooda dhaqaale iyo wax ku oolka ah, hawlgal ku habboon oo lagu kalsoonaan karo. Shirkadda waxay ku siin doontaa xallinta suurtagalka cutubka xakamaynta tirada ee ku saleysan hal abuurka iyo fikradaha ganacsi ee firfircoon iyo fikradda dabeecadda. Wadajir u wada dhalaalaan.
Mashiinka jarista xakamaynta kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah
Mashiinka goynta unugyada xakameynta tirokoobka gantry
Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Isku-dhafan ee loo yaqaan 'Gantry Plate'
Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee CNC
Waxaan isku dayeynaa inaan gacan ka geysanno bixinta xalkayaga ugu fiican adiga.